Qofkee i caawin kara? Waxaa la iigu xad gudbey galmo ahaan. – Tips for refugees
Previous Previous post: Hore ayaan galmo u sameeyay. Waxaana ku qaatay lacag. Ma tahay midaasi mid reeban ama mamnuuc ah?
Next Next post: Sideed ii caawin kartaan?